Xagee iyo sida loogu iibsado dhar raqiis ah ragga | Ragga Stylish
Halkee iyo sida loogu iibsado dhar raqiis ah ragga
Adduunku waa isbeddelay iyo habka wax loo iibsado iyo loo iibiyo sidoo kale. Xilligan la joogo, waxaan heli karnaa kumanaan alaab-qeybiyeyaal ah oo aan ka guurin guriga. Kumbuyuutarka ama Taleefanka casriga ah, waxaan ku heli karnaa dhar kala duwan, kabo iyo qalab. Iyo waxa ugu fiican waa inaan ku raaxeysan karno qiimo dhimis gaar ah ...
1 Maxay wax u iibsiga khadka tooska ah uga dhiganyahay iibsiga raqiis
2 Tilmaamaha ku saabsan helitaanka alaab-qeybiyeyaasha dharka ee khadka tooska ah isla markaana ku iibsada qiimo jaban
2.1 Go'aanso waxa aan dooneyno inaan iibsanno iyo inta aan qarash gareyn karno
2.2 Adeegso isbarbardhigayaasha qiimaha
2.3 Fiiro gaar ah u yeelo qiimaha gudbinta guryaha
2.4 Xulo habka lacag bixinta ugu fiican
2.5 Ha iloobin nabadgelyada
3 7 goobood oo laga iibsado dharka ragga ee raqiiska ah
¿Waa maxay sababta iibsashada internetka ay ula mid tahay iibsashada ka jaban?
Ugu horreyn, waa inaan tixgelinno in ganacsiyada farsamaysan aysan u baahnayn inay la kulmaan dhammaan kharashyada goobta jireed. Waxaan ula jeedaa: alaab-qeybiyeyaasha ayaa sidoo kale badbaadin kara lacag si ay qiimo fiican ugu fidiyaan macaamiishooda.
“Ganacsiga Jirka” waa inuu dib-ugu-dhigaa kharashaadkiisa korontada, gaaska, kirada, canshuuraha guryaha, iwm. Markaan dhar ka iibsanayno dukaan dhaqameed, ma bixinayno oo keliya qiimaha wax soo saarkiisa, laakiin sidoo kale kharashka suuqgeynta
Intaa waxaa dheer, iyadoo la raadinaayo sahlan isbarbardhiga qiimaha khadka tooska ah, waxaan si dhakhso leh u aqoonsannaa qiimaha ugu fiican iyo qiimo dhimista ugu soo jiidashada badan. Ilaa dhawr sano ka hor, saacado ayaannu ku lumin lahayn booqashada dhammaan bakhaarrada illaa aan ka go'aansano badeecad ku habboon dhadhankeenna iyo miisaaniyaddayada. Sidaas darteed, iibsashada khadka tooska ah waxay keydineysaa lacag iyo waqti.
Talooyin si aad uga heshid alaab-qeybiyeyaasha dharka khadka tooska ah ugana iibsadaan raqiis
Go'aanso waxa aan dooneyno inaan iibsanno iyo inta aan qarash gareyn karno
Sida wax kasta oo nolosha ah, dukaameysiga qadka tooska ah wuxuu leeyahay faa'iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa. Dhinaca kale, haddii aan ogaanno sida si wanaagsan loo baadho, waxaan heli karnaa sicirka ugu fiican oo aan lacag dhigan karno. Laakiin haddii nalaga qaado dhammaan xayeysiinta iyo qiimo dhimista, waxaan ku dambeyn doonnaa kharash aad uga badan intii aan filaynay.
Sidaa darteed, talada ugu horeysa ee ah inaad iibsato dhar jaban waa in la qeexo waxa aan u baahanahay inaan iibsano iyo inta aan qarash gareyn karno. Tani waxay noo oggolaan doontaa inaan hagno raadintayada oo aan ka digtoonaanno marka aan kharash gareyno.
Dalxiis ka isbarbardhiga qiimaha
Ka dib markii aan khibrad ka helay wax iibsiga khadka tooska ah, waxaan ogaanay inay jiraan qiimo dhimis badan oo aan dhab ahayn. Taasi waa, badeecadaha lagu xayeysiiyo iib ahaan iibiye, laakiin dhab ahaantii ka raqiisan meelo kale.
Qalab aad u fiican oo looga hortagi karo "khiyaanadan" ayaa ah inaad u adeegsatid isbarbardhiga qiimaha khadka tooska ah. Waxaa jira dhowr dhamaantoodna waa sahlan yihiin waana bilaash isticmaalka. Si fudud u qor magaca sheyga sanduuqa raadinta si aad dhaqso ugu hesho dhammaan qiimayaasha laga heli karo internetka.
Nasiib darrose, qalabkani marar dhif ah ayaa lagu dabaqaa goobaha kuu oggolaanaya inaad si toos ah uga iibsato Shiinaha ama dalal kale. Sidaa darteed, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la isbarbardhigo qiimaha mashiinka raadinta iyo kuwa lagu daabacay bogagga "ka adeegashada dibadda" laftooda.
Deyn amaah dareenka qiimaha gaarsiinta guriga
Markaan dooranayno inaan wax ku iibsano khadka tooska ah, waa inaan u fiirsano qiimaha guriga la keenayo. Qaar badan oo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha dharka ayaa bixiya maraakiib bilaash ah oo loogu talagalay iibsashada bulk ama alaabada miisaanka fudud. Tani waxay noqon laheyd xaalada ugufiican ee lagu iibsado runtii qiimo jaban oo internetka ah.
Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood waa wax aan macquul aheyn in laga fogaado kharashkan, sidaas darteed Waa inaan ku darnaa qiimaha dhoofinta qiimaha xayeysiinta dharka. Caadi ahaan haddii aan dooranno inaan wax ka iibsanno bogagga caalamiga ah, kuwaas oo qiimahooda gaarsiintu ay ka badan karaan.
Xullo mejor habka lacag bixinta
Runtu waxay tahay inay aad ugu habboon tahay inaad isticmaasho kaarka deynta oo aad u bixiso qayb ahaan. Dareenkan, iibiyeyaal badan ayaa bixiya qiimo dhimis hal-mar ah, wareejinta, deynta otomaatiga ah ama warqadda bangiga. Sababtaas awgeed, waxaa muhiim ah in laga feejignaado qiimo dhimista iyo danaha hab kasta oo lacag bixin ah oo ay bixiyaan bogagga.
Sidoo kale, waxaa si weyn loogu talinayaa in lagu abuuro astaan ​​isticmaale PayPal ama goob kale oo lacag bixin elektiroonig ah. Inbadan dharka keena Waxay aqbalaan qaabkan lacag bixinta, kaas oo u oggolaanaya kala wareejinta aalad kasta oo leh qadka Internetka, iyadoon la dalban oo aan la xaddidin duugista guryaha ee caadiga ah. Tani waxay u fududeyneysaa nolosha macaamilka iyo iibiyaha, tan iyo markii lacag bixinta isla markiiba la xaqiijiyay.
Dayacaad la'aan de amniga
Amniga ayaa ah qeybta ugu muhiimsan ee dukaamaysiga internetka. Waa inaanan waligeen ku darin faahfaahinteena shaqsiyadeed iyo bangiga bogagga aan haysan amni la xaqiijiyay. Sidoo kale laguguma talin karo inaad lacag ku bixiso internetka adoo adeegsanaya shabakado internet oo furan ama aan la aqoon.. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in la helo fayras lagu kalsoonaan karo si loo damaanad qaado amniga aaladaha tikniyoolajiyadeed.
7 goobood oo laga iibsado dharka ragga ee raqiiska ah
AliExpress Isbaanish: AliExpress waa goobta ugu caansan ee laga iibsado Shiinaha adduunka oo dhan. Barxaddiisu waa mid wacan oo fudud, waxay kuu oggolaaneysaa inaad si ammaan ah u fuliso baaritaannada iyo lacag-bixinta. Maxaa intaa ka badan, kumanaan alaab-qeybiyeyaal ah ayaa bixiya maraakiib bilaash ah iyo qiimo dhimis khaas ah.
Amazon: Boggaaga iyo barnaamijyadaada, waan heli karnaa noocyo badan oo badeecooyin ah iyo qiimo wanaagsan.
DealExtreme (DE): Waxay u badan tahay inay tahay goobta labaad ee ugu caansan dukaamaysiga Shiinaha, oo leh barxad la mid ah AliExpress. Waa suurtagal in laga iibsado tiknoolajiyada ugu dambeysa dharka iyo hadiyadaha. Dhammaantood waxaa laga raray Hong Kong qiime jaban.
Dukaanka Gaarka ah ee Ciyaaraha EN: meesha ugu fiican ee loogu talagalay dadka jecel isboortiga iyo nolosha taam. On ay madal, waxaan ka heli a noocyo kala duwan oo dharka isboortiga ah iyo agabyo kala duwan leh, oo leh qiimo dhimis dhan 70%.
DreiVIP: goobta waxay bixisaa dhar naqshadeeye leh oo qiimo dhimis gaaraya 80%.
mudnaanta: wuxuu ku saabsan yahay naadi khaas ah oo siiya qiimo dhimis xubnaheeda. Dhexdeeda waxaan ka heli karnaa moodooyinka dumarka, ragga iyo carruurta, dhammaantood summad leh oo qiimo wanaagsan ku fadhiya.
Dib-u-celinta: Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah dukaamada moodada ugu fiican ee bixiya qiimo dhimis aan la oggolaan karin. Barxaddeeda, waxaan ka helnaa dhar badan oo summad leh oo qiimo jaban leh iyo sidoo kale Waxaan ku guuleysaneynaa € 20 hadiyad ahaan kaliya markii aan iska diiwaangaliyo warsidaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Isbeddellada » Halkee iyo sida loogu iibsado dhar raqiis ah ragga
Waxaad ku qori: "Ganacsi jireed" waa inuu dib-u-dhigaa kharashkiisa ku baxa korantada, gaaska, kirada, canshuuraha guryaha, iwm. Iibkiisa.
Mudane García, aniga aragtidayda, waxaa la arkaa marar badan in "bakhaarada jireed" ay leeyihiin kharashaadka sahayda, kirada, iwm. ku shaqee daruur iyaga siiya qorraxda maalinta oo dhan, cirkuna waa mid caam ah. Hagaag, adiga fiiri, waxaan u maleynayaa inay tahay dhinaca kale, dhamaan shirkadahaas aad sheegaysid, Amazon, AliExpress, iwm, waxay leeyihiin kaabayaal aan horeyba kuugu sheegayo kharashaad badan oo aan xitaa udhowayn meherad jidheed. Intaas waxaa sii dheer, waa ii cadahay in ciidan saynisyahano kombiyuutar ah ay lacag badan ka qaadaan qaar ka mid ah la taliyayaasha ama kuwa ku tiirsan kuwa "dukaamada jirka", sidaa darteed, aan iska deyno iibinta hawada ee ku saabsan waxa aad xiiseyneyso oo aan noqonno dhex-dhexaad ama aan aqoonsanno in shirkadahaas internetka ah ee aad xusa waxay leeyihiin kharash kale oo lagu daray websaydhyada, saamileyaasha, instagramers, youtubers ama vbloggers oo aan hawada ka noolayn ama aan raqiis ku soo bixin. Salaan.
Ku jawaab Quique